Oleksandr Zinchenko Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Oleksandr Zinchenko Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius ine zita rekuti “Oleksy". Yedu Oleksandr Zinchenko Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakaitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Oleksandr Zinchenko Childhood Nyaya- Iyo Ongororo Kusvikira. Kiredhiti kuDonetskWay uye Transfer Mkt
Ongororo yacho inosanganisira yake yemhuri, hupenyu hwepakutanga, dzidzo / basa rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, iyo nzira yekuita mukurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwepamoyo uye mararamiro nezvimwe.
Ehe, munhu wese anomuziva iye semutambi iye anoshanda uye anovimba nesarudzo yaPep Guardiola kuruboshwe-kumashure sarudzo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Oleksandr Zinchenko's biography iyo inonyanya kufadza. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Oleksandr Zinchenko Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Oleksandr Zinchenko akaberekwa pazuva re15th raDecember 1996 kuna baba vake Volodymyr Zinchenko naamai (vane zita risingazivikanwe) muguta reUkraine reRadomyshl.
Oleksandr Zinchenko Baba naAmai
Zinchenko akakura ari iye oga mwana kuvabereki vake muRadomyshl, rine nhoroondo guta kuchamhembe kweUkraine iro rine mhuri yake mabviro nemidzi. Iri guta rakasurukirwa rinozivikanwa nhasi kune mamiyuziyamu uye zvigadzirwa zvevamwari zvaive nzvimbo yekutonga ye Kuurayiwa kweHolocaust, izwi rinoshandiswa kutsanangura Hondo Yenyika II kuuraya kwevaJudha veEuropean.
Chii kukura pamusoro Radomyshl anotaridzika Oleksandr Zinchenko
Zinchenko haana kurerwa kubva kumhuri yakapfuma yemhuri. Vabereki vake vakaita sevanhu vazhinji vanoita mabasa akajairika, vasina dzidzo yemari yepamusoro uye kazhinji vaiomerwa nemari.
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Dzidzo neKubata Buildup
Kuna Oleksandr, kusagadzikana kweguta rake kunopera nguva yega yega paine bhora patsoka. Aisave iye mwana uyo aifarira muunganidzwa mutsva wematoyi, ASI nhabvu chete uye kuva nehudiki mudiki shamwari yake yepamoyo.
Oleksandr Zinchenko Dzidzo uye Basa Kuvaka
Ane chipo neechiitiko chekutamba uye kuita zvinhu zvikuru nebhola renhabvu. Zinchenko akatanga nhabvu yake kupukunyuka mumba yekutandarira yemhuri, ruzha rwaipinda muminda yeRadomyshl. Kupa kuzvidzidzira mumutambo wenhabvu kwakabhadhara zvikamu zvavo semukana Zinchenko akashevedza miedzo mukirabhu yake yemuguta, Karpatiya Radomyshl.
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Basa Rokutanga Upenyu
Kuda kwaOleksandr Zinchenko pamutambo uyu kwakamuona pazera re8 achijoinana naKarpathi Radomyshl, kirabhu yevechidiki iyo yakamupa iyo nhanho yekuisa hwaro hwebasa.
Paaive pachikoro ichi, Zinchenko akacherekedza mutambi wenhabvu wega wega kusanganisira vaaibata navo vachinamata Andrei Shevchenko, mutambi mukurusa weUkraine uye chidhori kune vese. Olek ainyanya kutarira nezve-matarenda asina kubatwa muUkraine. Chese chaaida ndechekuti ave anotevera Sheva.
Zinchenko akagara naKarpatiya Radomyshl kwemakore 4 vasati vatariswa uye nekuwanikwa naMonolit Illichivsk imwe yeUkraine vechidiki kirabhu inozivikanwa nekugadzira matarenda madiki muzvikoro zvikuru. Akakurumidza kuita fungidziro nekirabhu iyi nekutenda kwake kutsiga pakati pevakaenzana naye. Zinchenko Akafambira mberi mumakore ezera, iro raimusvitsa mumiriri wepamusoro soro wenhabvu mukana.
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Oleksandr's drive uye kutsunga ndizvo zvinhu zvake zvakanyanya kukosha. Mwaka 2010 yakamuona achivhenekerwa neUkraine huru chikoro, Shakhtar Donetsk vakamupikisa kuti abvume. Zvishoma aisaziva kuti aive achipinda mu blockade yebasa. Zvino ngatitaurei zvakanyatsoitika !!
Olek aida kukwikwidza kupinda mukirabhu yetimu yepamusoro iyo yaive nemhando yepamusoro, idzo dzaFernandinho, Douglas Costa, uye Henrikh Mkhitaryan. MuSakhtartar, kusiyana nemamwe makirabhu evechidiki Olek yakatamba, mamiriro ezvinhu akave zvakaoma. Mumashoko ake:
Ini ndakanga ndasara nemakore maviri pachibvumirano changu uye vakandiudza kuti ndaifanira kuenderera navo ASI kuti ndisatambe muchikwata chekutanga. Ini hope dzangu dzaive dzekutamba muchikwata chekutanga.
Zvichitaurwa zviri nyore, iyo kirabhu YAKABVIRA nzira yake yekubudirira kuva nhabvu yepamusoro uye pakanga pasina nzira yekubuda kune vamwe vakomana vekuUkraine avo vakakanganiswa. Kuodzwa mwoyo uku kwakaitika kunyange aive kaputeni wechikwata chevechidiki.
Oleksandr Zinchenko Mugwagwa weFame Nhau. Chikwereti kuDonetsk-Way
Iyo kirabhu yakatomboenda kusvika pakubvumidza imwe yekuita naye kuti asaine asina vimbiso yekubatanidzwa-yekutanga-timu. Yaive simba contract contract yakapihwa yakauya sekutyisidzira. Mune mazwi eOlek;
Ivo vakati kana ndikasaina, ipapo handisi kuzovaitira, kunyange yavo vechidiki timu yandakakwanisa. Saka kwemwedzi inenge mina, ndakaora mwoyo. Ini ndaingopinda yese yekudzidzira chikamu asi haina kutamba. Ini ndanga ndiri pamusoro pehutapwa hwangu.
Kuwedzera mamiriro acho ezvinhu, Hondo yeUkraine yakatanga uye kirabhu yakapinda mudambudziko. Panguva iyoyo, Oleksandr akange achiri muchibvumirano chake. Hondo yakaita kuti vabereki vake vatamire kuguta reRussia reUfa, sarudzo yemhuri yakaita kuti Oleksandr arege basa rake rehudiki naShakhtar Donetsk.
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Kumuka Mukurumbira Nhau
Zvakapfuura zvakadzoka kuzomushungurudza mukuda kwake kuenda kune imwe hombe kirabhu kuti atange basa repamusoro.
Waizviziva here? Pane zera 16, zvibvumirano zveOleksandr zvibvumirano naShakhtar zvakamudzivirira kusaina naRubin Kazan. Iri raive rimwe dambudziko rakamumisa kuti atambe yeanpping 18 mwedzi. Zvakatora iyi nguva yenguva kuti zvese zvigadziriswe. Pakupera izvi, Oleksandr akabatana naUfa, kirabhu yebhora yeRussia inogara muUfa, iro guta raigara vabereki vake. Iyo kirabhu yakapa Oleksandr mukana wekutamba muRussia Premier League.
Kungova kuri kudiwa ndiko kuvimba kwekuwedzera kune wechidiki Ukranian uyo akanzwa kuda kuvhurwa kune mutsva tsika, nzira yekudzidzira uye tsika. Oleksandr Zinchenko akatsungirira meteoric diki basa repamusoro kusimudzira muUfa sezvo akazova mumwe weanon'a kwetekirabhu inopisa.
Kukura kweOleksandr Zinchenko kuRussia. Chikwereti ku90Min
Kuita kwake kwakakwezva zvikwata zvepamusoro zveEurope pakati peMan City. Pa 4 Chikunguru 2016, Zinchenko akasainira timu yePremier League kirabhu yeManchester City kune mari isingazivikanwe inotendwa kuve inosvika mamirioni 1.7 miriyoni.
Achisvika pagungano rakazadzwa padziva retarenda, Zinchenko akabvuma kuzvikanda kuPSV Eindhoven, kirabhu yakamubatsira kujairana nehupenyu kumadokero kweEurope. Kudzokera kwake kuMana guta pakutanga akanzwa kumora, asi yakazouya nekurwara kwemhanza pakakuvara kwa Benjamin Mendy akamupa mukana wekuti akande chikumbiro kuruboshwe-kumashure. Sezvo panguva yekunyora, Zinchenko mumwaka we2018 / 2019 akabatsira timu yake kuhwina mukombe wavo.
Oleksandr Zinchenko Simuka kune Mukurumbira Nhau
Kunyangwe iye angave asiri Andriy Shevchenko waakamboda, asi Oleksandr Zinchenko ane kwakaratidza kune nyika kuti iye anotevera akanaka anovimbisa ezvizvarwa zvake zveUkranian nhabvu. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira uye kuhwina treble yeMan City, zvine chokwadi chekuti vateveri vazhinji vangadai vakabvunza mubvunzo unopisa; Who is Oleksandr Zinchenko's musikana kana mukadzi?. Hapana chinoramba chokwadi chekuti chimiro chake chakanaka chaisazoita iye dhadha kune vateveri vechikadzi. Nekudaro, kumashure kweiye akabudirira nhabvu, kune musikana akanaka, mune Vlada Sedan uyo mutori venhau weUkranian.
Maizviziva here? … Nyeredzi yeMAN City yakadanana nemusikana wake paakange ari pabasa naye semutengi wake. Nekuda kwekuti iye airatidzika aine runako rwakanaka, Oleksandr Zinchenko haana kungoedzwa, asi akawira murudo rwakadzama zvekuti akadyara kutsvoda paari pakati pebvunzurudzo yeTV.
Oleksandr Zinchenko Hukama Hupenyu- Chikwereti kune Zuva
Uku kubvunzurudza zvakaitika apo nyika yekuUkraine ichangobva kubuda mumunda mushure mekukunda kukuru Serbia mumutambo we Euro 2020.
Mushure mekutsvoda kwakadyarwa, vateveri vakazo simbisa runyerekupe rwekuti vaviri vadiwa vaive vatanga kudanana. Kubva panguva iyoyo yakanaka, vadikani vese vari kudhakwa vachidanana uye vachionana kubva kune akati wandei kutorwa kubva kuma social media account.
Oleksandr Zinchenko naVlada Sedan
Pasina kupokana, Oleksandr naVlada vakaramba vari mumwe wevakaroorwa akasimbiswa munyika yeUkraine bhora renyika. Imwe yeavo murume nemudzimai vanofarira kuwana zhizha ndeye Simpsons Ride iri muOrlando, FL 32819, USA.
Oleksandr Zinchenko Nyaya Yerudo naVlada Sedan
Icho chokwadi chekuti vese vari vaviri vanoita sevasiri kuita kunge vanononoka pane avo erudo chinosiya pasina mubvunzo kuti muchato kana muchato unogona kunge uri wedanho rinotevera.
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Upenyu hwehupenyu
Chii chinoita kuti Oleksandr Zinchenko abike ..? Kusvika pakuziva hupenyu hwake hwega kubva pabhora renhabvu kwaizokubatsira kuti uwane zvakakwana mufananidzo wake.
Kutanga kuenda, iye ari mutambi wenhabvu ane hunhu hwakaoma uye hunhu hunoumbwa ne "Mumwe muzana tarenda, 99 muzana kushanda nesimba.. Oleksandr ndiSagittarius-akaberekwa uye anofarira kuseka uye kunakidzwa nekusiyana kwehupenyu sekuonekwa pamufananidzo uri pazasi.
Oleksandr Zinchenko Hupenyu Hwechokwadi
Uyu hunhu hwe-off-hunhu hwakasiyana zvachose kubva kumunhu waanova iye achiita bhizinesi rake padanho.
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Upenyu hweMhuri
Tichitarisa kubva pamufananidzo uri pazasi, unogona kuona zviri nyore kuti vabereki vaOleksandr Zichenko Irina naVictor parizvino vari kuwana goho nemakomborero kubva kumwanakomana wavo anodikanwa.
Oleksandr Zinchenko Vabereki
Kubva pane izvo zvinoita, Oleksandr anofarira kutora vabereki kuenda kunodya. Zvake kuzvipira kuti ave nechokwadi chekuti baba vake pamwe naamai vagadzikama kwakafanana nekuzvipira kwaanoisa padanho.
Oleksandr Zinchenko anobvisa vabereki vake
Oleksandr anoratidzika kuva ari pedyo zvikuru naamai vake, kusiyana nababa vake. Ane akafanana nepedyo kuna mai vake, kusiyana nababa vake avo iwe unogona nyore kuudza kubva pamufananidzo.
Oleksandr Zinchenko naamai vake- Irina
Kunyange zvishoma zvichizivikanwa kana iye aine chero hama (s) kana hanzvadzi (s), Oleksandr maSekuru-baba vanehupenyu hwakanyanya sapamoyo panguva yekunyora.
Oleksandr Zinchenko Hupenyu hwemhuri
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - LifeStyle Facts
Muna Chikunguru 4th, 2016 iyo Ukranian yakasaina chibvumirano neManchester City iyo inomutambidza mubairo wekupfuura we250,000 Euro (219,000 Pound) pagore. Isu takadzvanya manhamba, izvi zvinoreva kuti anotambira $ 683 (£ 601) pazuva uye € 28 ($ 25) paawa. Kunyepedzera iwe uchiwana huwandu hwemari idzi uye zvawaizoita nazvo. Kuna Oleksandr, anofarira kurarama hupenyu hwakareruka.
Oleksandr Zinchenko LifeStyle Chokwadi. Kiredhiti WTFoot
Oleksandr Zinchenko Childhood Story Plus Untold Biography Facts - Untold Fact
Iyo Yakakanganisika Ziva: Oleksandr Zinchenko uye Kevin De Bruyne vane a kusiyanisa bvudzi rakaringana uye rinotaridzika kufanana. Ichi ndicho chikonzero chikuru chekusanzwisisana uye kusazivikanwa kuzivikanwa pakati pevatambi veMan City. Kubva kure, vanoratidzika semapatya, asi kana isu tiri pamwechete, vaviri anotaridzika zvakasiyana.
Oleksandr Zinchenko naKevin De Bruyne- The Resemblance
Kutaura nezveizvi, Zinchenko akamboti; “Ndazvinzwa nguva dzese, vimba neni. Vanhu vazhinji vanondidaidza kuti 'Kev kunyanya pandinenge ndiri kupinda mubhazi rechikwata. The vateveri vaizodaidzira 'Kev, ndinogona here kuva nepikicha?' Asi pandakatendeuka, vangaita kunge 'Oo, haasi Kevin'. Kiredhiti teregirafu
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Oleksandr Zinchenko Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
PSV Eindhoven Nhau dzeBhora
ChiUkraine Bhora Diary
Brahim Diaz Mwana Wenyaya Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Kurume 6, 2019
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 15, 2020
Aymeric Laporte Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts